Izinyathelo Ezi-7 Zempumelelo Yokumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
Izinyathelo Ezi-7 Zempumelelo Yokumaketha Okuqukethwe
UMsombuluko, May 5, 2014 ULwesibili, May 6, 2014 Douglas Karr
Akufanele kube ngumbuzo mayelana nenani nokusebenza kwecebo lokuthengisa lokuqukethwe eliqinile. Ibhizinisi lakho lidinga ukushaya kwenhliziyo okungaguquguquki kokusakazwa kokuqukethwe okuthola ukunakwa kwamathemba, okwakha igunya lakho nokwethemba ku-inthanethi, futhi ekugcineni kushayele ukuguqulwa ngeziteshi zakho zokuthengisa ezingenayo neziphumayo. Akukho okumangazayo kulokhu infographic evela ku-Smart Insights - kepha ukwakha ifayili le- isu lokuthengisa lokuncintisana lokuqukethwe yenziwe kahle kule infographic elula yokugaya.
Ukukusiza ukuthi ubuyekeze noma ulinganise ukuthi ukuncintisana kahle kangakanani nokumaketha kwakho okuqukethwe, ngesinyathelo ngasinye ku-infographic, ngifake ucwaningo olufanele oluvela mahhala Ukuphatha ukumaketha kokuqukethwe embikweni wocwaningo we-2014 I-Smart Insights idalwe nge I-Hubspot.
I-Benchmark ukusebenzisa kwakho kwamanje kokumaketha kokuqukethwe.
Thuthukisa ukumaketha kokuqukethwe isu.
Qonda ikhasimende nomkhiqizo izidingo kusuka kokuqukethwe.
Yenza ukuhlakanipha ezitshaliwe ekukhangiseni okuqukethwe.
Khetha okungcono kakhulu hlanganisa zezinsizakusebenza.
Dala okuqukethwe okuphumelela kakhulu amafomethi.
Sebenzisa analytics ukubuyekeza i-ROI ne Inani.
Isaziso seWebinar: Ukuguqulwa Ngokuxoxa Indaba
ICrittercism: Ukuqapha Ukusebenza Kokusebenza Kweselula